दुबईमा २०० जना डेलिभरी बोयमा रोजगारको अबसर । अन्य सेवा सुबिधाहरु के कति हुने ? - बैदेशिक पोष्ट
दुबईमा २०० जना डेलिभरी बोयमा रोजगारको अबसर । अन्य सेवा सुबिधाहरु के कति हुने ?
कार्तिक २६, २०७८ ११;४६ बिहान प्रकाशित
काठमाडौँ । यु.ए.ई.को बहुप्रतिष्ठित कम्पनि Only Click Delivery Services llc UAE मा नेपाली पुरुष कामदारको माग गरेको छ । Only Click Delivery Services llc UAE कम्पनीले डेलिभरी बोय पोस्टका लागि २०० जना नेपाली कामदारको माग गरेको हो ।